Rafitra fampianarana any RDC, Repoblika Demokratikan'i Kongo - ALinks
Any amin'ny Repoblika Demaokratikan'i Congo, ny fanabeazana fototra dia mety haharitra hatramin'ny enin-taona. Ny sekoly ambaratonga faharoa dia mety haharitra enin-taona vao vita. Ny mpianatra rehetra dia mila mamita fanadinam-pirenena amin'ny faran'ny sekoly ambaratonga faharoa.
Ny rafi-pampianarana ao RDC, Repoblika Demokratikan'i Congo
Maharitra 12 taona eo ho eo ny fampianarana Any amin'ny Repoblika Demokratikan'i Congo, na RDC, RD Congo, na Congo-Kinshasa, izany dia hatrany am-piandohana ka hatramin'ny faran'ny fampianarana ambaratonga faharoa.
Ny taom-pianarana dia manomboka amin'ny Septambra ary mifarana amin'ny Jona. Ny oniversite, manomboka ny taom-pianarana amin'ny volana oktobra ary mifarana amin'ny Jolay. Ny taranja tsirairay ao amin'ny oniversite dia maharitra iray taona akademika.
Ny rafi-pampianarana DRC dia manome vahana ny sekoly ambaratonga voalohany. Ao amin'ny sekoly ambaratonga fototra, ny fianarana tsy miankina amin'ny fianarana dia natao laharam-pahamehana noho ny fianarana ambony. Ny fandaharam-pianarana sekoly ambaratonga faharoa dia ara-akademika kokoa. Ny RDC dia maniry ny hahatonga ny fandaharam-pianarana ho Afrikana kokoa. Te hampianatra bebe kokoa momba ny tantara sy ny kolontsaina eo an-toerana izy ireo. Ary izy ireo koa dia hampiroborobo ny fianarana ny fiteny afrikanina. Mbola mazoto mianatra teny frantsay sy anglisy ny mpianatra ho fanatsarana ny tenany. Ny maodelin'ny sekolin'i Belzika sy Frantsa dia misy fiantraikany amin'ny fandaharam-pianarana ao amin'ny DRC.
Mampiasa ny fiteny eo an-toerana ny sekoly, indrindra fa ny sekoly ambaratonga fototra. Mety ho iray amin'ireo efatra lehibe ireo: Kikongo, Lingala, Tshiluba ary Swahili. Iray amin'ireo fiteny velona an-jatony any RD Congo koa anefa. Ny teny frantsay no fiteny ofisialin'ny fampianarana, indrindra fa ny sekoly ambaratonga voalohany.
mialoha ny sekoly
Roa taona ny akanin-jaza any RDC. Izy io dia ho an'ny taona 3 ka hatramin'ny 5 taona.
Any RD Congo, any amin'ny sekoly ambaratonga fototra, ny salan-taonan'ny fidirana an-tsekoly dia 5 taona sy tapany. Misy naoty enina amin’ny fanabeazana fototra. Misy efitrano fiomanana roa, kilasy fototra roa ary kilasy antonony roa.
Ny sekoly ambaratonga faharoa dia mety haharitra dimy na enin-taona vao vita. Ny sekoly ambaratonga faharoa dia mety ho ankapobeny na teknika. Dimy taona ho an’ny sekoly ambaratonga faharoa teknika. Ny enin-taona dia ho an'ny sekoly ambaratonga faharoa ankapobeny. Samy nizara roa taona izy ireo. Ny ambaratonga ambany dia maharitra roa taona ho an'ny mpianatra 12 ka hatramin'ny 14 taona. Ny ambaratonga ambony dia maharitra efa-taona ho an'ny mpianatra 14 ka hatramin'ny 17 taona na hatramin'ny 18 taona.
Raha te hiditra eny amin’ny anjerimanontolo, dia tsy maintsy mandalo fanadinana nasionaly na “diplôme d’etat” ny mpianatry ny sekoly ambaratonga faharoa. Mila lany amin'ny naoty farafahakeliny 50 isan-jato izy ireo. Rehefa tafiditra ao amin'ny oniversite ny mpianatra dia tsy maintsy mandalo fanadinana faran'ny taona. Izany dia lahatsoratra momba ny lohahevitra tsirairay raisina, ary koa ny fanadinana am-bava. Raha tsy mahomby ny mpianatra dia afaka mamerina ilay taranja izy ireo amin'ny fipetrahana mandritra ny taona fanampiny. Ny mpianatry ny oniversite dia tsy maintsy manoratra sy miaro ny thesis mba hahazoana fahazoan-dàlana.
Ny mpianatra dia afaka mandeha any amin'ny sekoly ambaratonga fototra mankany amin'ny sekoly arak'asa fa tsy ny sekoly ambaratonga faharoa. Manao izany izy ireo noho ny tombontsoany sy ny fahombiazany amin'ny fianarana. Afaka mandray anjara amin'ny programa hatramin'ny 5 taona amin'ny varotra sy asa tanana maro izy ireo. Amin'ny farany dia hahazo mari-pahaizana brevet izy ireo.
Manao ahoana ny fanabeazana any RDC?
Ny kalitaon'ny fanabeazana dia antonony. Izany dia noho ny toe-javatra iainan’ireo mpianatra ireo ihany koa. Fa ambonin’ny zava-drehetra, noho ny fahaiza-manaon’ny mpampianatra no anton’izany. Vitsy loatra izy ireo raha ny isan'ny mpianatra. Tsy voaofana tsara izy ireo ary ambany karama. Mpampianatra Kongoley maro no manana lesoka mibaribary amin'ny saika taranja rehetra.
Mpianatra dimy amin'ny enina any amin'ny sekoly ambaratonga fototra dia tsy afaka mamaky lahatsoratra tsotra amin'ny teny frantsay. Miharatsy izany any ambanivohitra. Iray amin’ny zazalahy folo ihany no mahay mamaky teny frantsay. Ary iray amin'ny roa ambin'ny folo vavy ihany no mahay mamaky teny frantsay.
Mianatra any DR Congo ve ny ankizivavy?
Tovovavy maro no miala amin'ny fianarana amin'ny fiafaran'ny sekoly ambaratonga fototra sy mandritra ny taona voalohany amin'ny tsingerina faharoa. Ny antsasaky ny zazavavy latsaky ny 19 taona dia niala an-tsekoly. Izany dia noho ny fanambadiana aloha loatra sy ny fitondrana vohoka aloha sy tsy niriana,
Maimaim-poana ve ny sekoly any RDC?
Tsia, na dia tanjon'ny governemanta RDC aza ny sekoly maimaim-poana. Mbola tsy afaka manome fanabeazana fototra ho an'ny rehetra ny RDC. Ny salanisan'ny saram-pianarana isan-taona isaky ny ankizy dia manomboka amin'ny $ 25 ka hatramin'ny $ 35 ho an'ny sekoly ambaratonga voalohany ary $ 30 hatramin'ny $ 50 ho an'ny sekoly ambaratonga faharoa. Sakana lehibe amin'ny fahazoana fianarana ny vola. Ny ray aman-dreny no miantoka ny ampahany betsaka amin'ny saram-pianaran'ny ankizy iray.
Firy ny tahan'ny mahay mamaky teny sy manoratra ao amin'ny Repoblika Demokratikan'i Congo?
Telo amin'ny efatra ny teratany Kongoley mihoatra ny 15 taona no mahay mamaky teny sy manoratra. Ny tahan'ny fahaizana mamaky teny sy manoratra dia ambony kokoa ho an'ny lehilahy ary ambany kokoa ho an'ny vehivavy. Lehilahy sivy amin'ny folo ao RDC no mahay mamaky teny sy manoratra. Raha 67 isan-jaton'ny vehivavy ihany, enina na fito amin'ny vehivavy folo, no mahay mamaky teny sy manoratra.
Sources: StateUniversity Demaokratikan'i Congo Rafitra Fanabeazana, MeridiE fanabeazana en rdc,
Ny sarin'ny cove dia any Binza, Kinshasa, Repoblika Demokratikan'i Congo. Sary avy amin'i Kaysha on Unsplash
Janoary 7, 2022
Banky tsara indrindra any amin'ny Repoblika Demokratikan'i Kongo